FREEMAKE ပေး AUDIO CONVERTER 1.1.8.12 အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Freemake ပေး Audio Converter 1.1.8.12
ကျနော်တို့ပြီးသား Photoshop ကိုသုံးပြီးတစ်မော်ဒယ်ရဲ့မျက်နှာအနည်းငယ်ပါးလွှာအောင်ဘယ်လိုဆွေးနွေးတင်ပြကြပါပြီ, သင်နှင့်အတူချစ်လှစွာသောစာဖတ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက် filter ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် "မှန်ဘီလူးပြင်ဆင်ခြင်း" နှင့် "ပလတ်စတစ်".
ဒီမှာသင်ခန်းစာင်: Photoshop မှာအသွင်အပြင်။
သင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းစနစ်, အပါးများနှင့်အခြား "ထူးချွန်" features တွေလျှော့ချ, ဒါပေမယ့်ပုံထဲကအနီးကပ်အကွာအဝေးမှာယူနဲ့, အပြင်, ထိုမော်ဒယ်ရဲ့မျက်နှာ (မျက်စိ, နှုတ်ခမ်း ... ) အလုံအလောက်ပေါ်လွင်ခဲ့ပါတယ်ရှိရာကိစ္စများတွင်သက်ဆိုင်များမှာနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျတစ်ဦးချင်းစီကိုကယ်တင်ချင်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာလျော့နည်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါစေလိုလျှင်သင်သည်အခြား method ကိုအသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကိုနှင့်ယနေ့သင်ခန်းစာတွင်ဟောပြောပွဲအကြောင်း။
တဦးတည်းအတွက်လူသိများတဲ့မင်းသမီးတစ်ဦး guinea ဝက်အဖြစ်ပြုမူပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့သူမ၏မျက်နှာ minimize ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, တူစွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
အမြဲအဖြစ်ကျနော်တို့ Photoshop မှာပုံဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်လမ်းသော့မိတ္တူဖန်တီး CTRL + J ကို.
ထိုအခါငါတို့သည် tool ကို "ကလောင်" ယူနှင့်မင်းသမီး၏မျက်နှာကိုရွေးပါ။ သင်တစ်ဦး tool ကို select လုပ်ပါရန်အဘို့အသငျသညျအဆင်ပြေအခြားမည်သည့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ငါကဲ့သို့သော, တစ်ဦးကလောင်အမည်ကိုသုံးလျှင်, ညာအောအတွင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် item ကို select "ရွေးချယ်ရေး Make".
Radius ကို0င် pixels ကိုဖော်ထုတ် feathering ။ ပုံရိပ်မှာကဲ့သို့အခြား setting များ။
ထို့နောက်တစ်ရွေးချယ်ရေး tool ကို (သော်လည်းကောင်း) ကိုရွေးချယ်ပါ။
ညာဘက်ရွေးချယ်ခြင်းအတွင်းပိုင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် item ကိုရှာ "အလွှာအပေါ် Cut".
ယခုမကျြနှာကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ CTLR + T ကို ကျနော်တို့ရာခိုင်နှုန်းအရွယ်အစားလိုအပ်ထိပ် panel ကိုအရွယ်အစားဆက်တင်ပေါ်တွင်လယ်ပြင်၌ဤ၌ထားလေ၏။
ယင်းရှုထောင့်, စာနယ်ဇင်းဖော်ပြပေးပြီးတာနဲ့ ENTER.
တစ်ဦးမျက်နှာတစ်ဦးနောက်ခံပုံ remove အားမြင်သာမရှိဘဲအလွှာကိုသွားပါ။
menu ကိုသွားပါ "Filter ကို - ပလတ်စတစ်".
ထိန်းညှိဖို့လိုအပ်သောကြောင့် "အဆင့်မြင့် Options"ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး checkbox ကိုထားအတွက် configuration, ပဲ့ထိန်းစခရင်ပုံတည် ထား. ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက်အရာအားလုံးအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ တစ်ဦး tool ကိုရွေးချယ်ခြင်း "ပုံပျက်သော", Brush အရွယ်အစား, အလယ်ကို select (သင် tool ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဒါကြောင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့လိုပါတယ်) ။
ပုံပျက်သောအားဖွငျ့အလွှာအကြား space ကိုပိတ်ပါ။
လောကီအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ , စာနယ်ဇင်းပြုမိသည့်အခါ OK ကို.
ဒါဟာ Photoshop မှာအခြားကြိုဆိုလျော့ချရေးမျက်နှာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗီဒီယို Watch: Leica Magnus 50 VS Zeiss Victory V8 50 (အောက်တိုဘာလ 2019).